EIA statement on political situation in Myanmar and related timber trade issues - EIA
On 1 February 2021, Myanmar’s armed forces seized control of the country and declaredaone-year state of emergency.
Myanmar Timber Enterprise log depot (c) EIAimge
The MFPTMA statement also claims Myanmar is complying with the EU Timber Regulation (EUTR). It is not.
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး လကျရှိနိုငျငံရေး အခွအေနနှေငျ့တကှ ဆကျစပျသော သဈကုနျသှယျမှု အရေးကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြ စုံစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့ (အီးအိုငျအေ) ၏ သဘောထားထုတျပွနျခကျြ
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံ၏ အစိုးရစဈတပျဖှဲ့မြားသညျ တနိုငျငံလုံးကို ထိနျးခြုပျ အာဏာသိမျးလိုကျပွီး အရေးပျေါ အခွအေနကောလ တနှဈသတျမှတျကွောငျး ကွညောခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ ဖွဈစဉျအတှငျးတှငျ နိုငျငံတဝနျးရှိ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျ ထိပျတနျး ပါတီဝငျမြား၊ အရပျသားခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးရေးရာ တကျကွှလှုပျရှားသူမြား အဖမျးခံရသညျ့အပွငျ ဆကျသှယျရေးလမျးကွောငျးမြားလညျး ကနဦး လုံးဝ ဖွတျတောကျခံရပွီး နောကျပိုငျးတှငျလညျး ပွနျရသျောလညျး ပုံမှနျမဖွဈသေးသညျ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံသားမြား ပွငျပကမ်ဘာနှငျ့ရော အခငျြးခငျြးပါ သီးခွားခှဲထုတျခံရသလို ဖွဈနေ၏။
ဖဖေျောဝါရီလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ အီးအိုငျအေ က မွနျမာနိုငျငံ သဈတောထှကျပစ်စညျးနှငျ့ သဈလုပျငနျးရှငျမြား အသငျးမှ စာတစောငျနှငျ့ ကွညောခကျြတခုကို အီးမေးလျမှတဆငျ့ ရရှိခဲ့ရာတှငျ “မွနျမာနိုငျငံမှ တငျပို့သူ လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ ဥရောပသမဂ်ဂအဖှဲ့ (အီးယူ) နိုငျငံမြားမှ တိုကျရိုကျဝယျယူသူမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဆိုငျရာ ဝနျကွီးဌာန၊ သဈတောဌာနနှငျ့ မွနျမာ့သဈလုပျငနျးတို့၏ တငျးကပျြသော ခနျ့ခှဲမှုအရ ပွဌာနျးထားသော သဈတောဆိုငျရာ တညျဆဲ ဥပဒမြေား၊ စညျးကမျးမြား၊ စညျးမဉျြးမြားနှငျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားအရ ဥပဒဘေောငျအတှငျးမှ တရားဝငျ ကုနျသှယျမှု ပွုနကွေပါသညျ။” ဟု ဖျောပွထားပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ သဈတောထှကျပစ်စညျးနှငျ့ သဈလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးသညျ ၄ငျးတို့၏ ကွညောခကျြတှငျ ပါဝငျသော မွနျမာနိုငျငံမှ သဈတငျပို့မှုဆိုငျရာ ဥပဒကွေောငျးအတိုငျး လုပျဆောငျနမှေုမြားနှငျ့တကှ ၄ငျးတို့ကို မှမျးမံပွငျဆငျမှုမြား ပွုလုပျနသေညျ ဆိုသညျ့ အခကျြအလကျမြားကို ပွညျပမှ ဝယျယူနိုငျခွရှေိသော လုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျး (အနျဂြီအို) မြားအား ဆကျလကျ ဖွနျ့ဖွူးပေးရနျ အီးအိုငျအနှေငျ့တကှ အခွား အလားတူ အဖှဲ့အစညျးမြားကို တောငျးဆိုနပေါသညျ။
အီးအိုငျအေ၏ ရပျတညျခကျြအား ပွတျပွတျသားသား ပွောရလြှငျ အီးအိုငျအသေညျ မွနျမာနိုငျငံမှ အစပွု ခုတျထှငျ ထုတျလုပျထားသော မညျသညျ့ သဈလုံးနှငျ့ သဈသားဆကျစပျ ထှကျကုနျမြိုး ကုနျသှယျခွငျးကိုမြှ ထောကျခံလိမျ့မညျ မဟုတျပါ။
အီးအိုငျအသေညျ လှနျခဲ့သော ဆယျစုနှဈအတှငျးတှငျ မွနျမာ့သဈတောမြားဟာ ဗွောငျကကြ ခိုးယူ အသုံးခမြှုမြား၊ မွနျမာအစိုးရစဈတပျဖှဲ့၏ ထိပျပိုငျး အရာရှိမြားထံတှငျ အစပွုသော အဆငျ့မွငျ့ အကငျြ့ပကျြ ခွစားမှုမြား၊ မွနျမာနိုငျငံ ပွညျသူမြားက ၄ငျးတို့၏ လုံခွုံရေးနှငျ့ စားဝတျနရေေးတို့အတှကျ မှီခိုအားထားသော သဈတောကွှယျဝသညျ့ နယျမွမြေားအတှငျး ကြူးလှနျသော ရာဇဝတျမှုမြားကို ဖျောထုတျနခေဲ့သော အဖှဲ့ဖွဈပါသညျ။
အီးအိုငျအသေညျ အဆိုပါ မွနျမာ့သဈတောမြားအား ခိုးယူ အသုံးခမြှုမြားကို ဆကျလကျ ပံ့ပိုးနသေော မွနျမာနိုငျငံ၊ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြား၊ ဒသေတှငျး နိုငျငံမြား၊ ဥရောပနှငျ့တကှ အမရေိကနျနိုငျငံတို့ အတှငျးရှိ လူပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ အဖှဲ့အစညျးမြားကိုလညျး ထုတျဖျောခဲ့ရာတှငျ ထိပျတိုကျ ထုတျဖျောခံရသူမြားက အမြားအားဖွငျ့ နာကညျြးစိတျဆိုးကွသညျကိုလညျး ဖျောပွခဲ့ကွပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျး သဈတောဆိုငျရာ ခနျ့ခှဲ အုပျခြုပျမှုနှငျ့ လုပျထုံးနညျးလမျး ဆိုငျရာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု ဖွဈဖို့အရေးသညျ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ မတိုငျခငျက ဖွဈနိုငျခြေ ရှိခဲ့ပွီး မွနျမာ့သဈတောကဏ်ဍကလညျး နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးနှငျ့တကှ လူမှုအခွပွေု အဖှဲ့အစညျးမြား၊ သဈတောမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာ ပညာရှငျမြားနှငျ့တကှ ပုဂ်ဂလိကပိုငျးကပါ အားပေး ထောကျခံမှုလညျး ရရှိနခေဲ့၏။
ယခုအခါတှငျမူ မွနျမာနိုငျငံ၌ အစိုးရစဈတပျဖှဲ့က ရှေးခယျြတငျမွှောကျသော အစိုးရအဖှဲ့က နိုငျငံ၏ ကဏ်ဍအားလုံးကို အုပျခြုပျလုပျနိုငျနပွေီ ဖွဈပွီး ၄ငျးအစိုးရအတှကျကိုသာ အကြိုးရှိစသေညျ ဖွဈသောကွောငျ့ အထကျဖျောပွပါ မွနျမာ့ သဈတောဆိုငျရာ ခနျ့ခှဲ အုပျခြုပျမှုနှငျ့ လုပျထုံးနညျးလမျး ဆိုငျရာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု ဖွဈမလာနိုငျတော့ပါ။
မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ ပွညျပကို သဈတငျပို့သူမြားနှငျ့တကှ မွနျမာနိုငျငံ သဈတောထှကျပစ်စညျးနှငျ့ သဈလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးဝငျမြားက ၄ငျးတို့သညျ မွနျမာ့သဈလုပျငနျးထှကျ ကုနျကွမျးမြားကိုသာ အားထားမှီခိုရပွီး ၄ငျးမွနျမာ့သဈလုပျငနျးကလညျး ပုံမှနျအတိုငျး လုပျငနျးလညျပတျမှု ရှိသညျဟု ပွောဆိုကွပါသညျ။
သို့ရာတှငျ မွနျမာ့သဈလုပျငနျးသညျ အစိုးရပိုငျ လုပျငနျးဖွဈပွီး အမရေိကနျဒျေါလာ သနျးပေါငျး ထောငျခြီသော အမွတျအစှနျးမြား ရရှိနသေော လုပျငနျးဖွဈသျောလညျး ၄ငျးအမွတျအစှနျးမြား မညျသညျ့နရောကို ရောကျရှိသှားပွီး မညျကဲ့သို့ အသုံးပွုနသေညျ ဆိုသညျ့ အခွအေနမြေားကို ကွပျမတျစောငျ့ကွညျ့ခံရခွငျး မရှိသကဲ့သို့ တာဝနျယူ တာဝနျခံရခွငျးလညျး မရှိပေ။ ၄ငျး၏ အမွတျအစှနျး ခနျ့ခှဲမှုမှာ လှနျစှာ မရှငျးမလငျးရှိလှပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ သဈတောတငျပို့မှု ဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု၏ လကျအောကျတှငျ ရှိမနသေော လုပျငနျးတခုလညျး ဖွဈ၏။
မွနျမာနိုငျငံ သဈတောထှကျပစ်စညျးနှငျ့ သဈလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးက မွနျမာနိုငျငံသညျ အီးယူအဖှဲ့၏ သဈတောဆိုငျရာ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြား (အီးယူတီအာ) နှငျ့အညီ လုပျဆောငျနသေညျဟုလညျး ပွောဆိုထား၏။ တကယျတမျး ထိုသို့မဟုတျပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှ သဈဝယျယူလိုသူမြား အားလုံးအား အီးအိုငျအကေ သတိပေးလိုသညျ့ အခကျြမှာ အီးယူအဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ လုပျငနျးဆောငျရှကျမှု စနဈက အဆိုပါ အီးယူတီအာ စညျးကမျးမြားကို ဘာ့ကွောငျ့ လိုကျနာမထားကွောငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဘုံရပျတညျခကျြတခု ရှိသညျ ဆိုသော အခကျြဖွဈသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ၏ အဖိုးတနျသဈမြားသညျ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုတို့ နထေိုငျရာ တောတောငျနယျမွမြေားတှငျ အဓိက တညျရှိကွပွီး ၄ငျးနယျမွမြေားအတှငျး အန်တရာယျ ခွိမျးခွောကျမှုမြား ခံနရေသညျမှာ ဆယျစုနှဈပေါငျးမြားစှာ ရှိပွီ ဖွဈသညျ။ မွနျမာအစိုးရ စဈတပျဖှဲ့သညျ ၄ငျးနယျမွမြေားကို အငျအားသုံး ရယူခွငျးအားဖွငျ့ ပဋိပက်ခမြား အရှိနျမွှငျ့ ဖွဈပှားလာစကော ထောငျနှငျ့ခြီသော အပွဈမဲ့ အရပျသားမြားကိုလညျး ဘေးလှတျရာ ထှကျပွေးရစခေဲ့၏။
ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ မွနျမာအစိုးရစဈတပျဖှဲ့၏ အာဏာသိမျးမှုနှငျ့အတူ အီးအိုငျအကေ မွနျမာနိုငျငံက သဈနှငျ့ သဈထှကျကုနျပစ်စညျးမြား ဝယျယူလိုသူမြားအား သတိပေးလိုသညျမှာ ထိုသို့ ဝယျယူခွငျးအားဖွငျ့ မွနျမာ့သဈတောမြားအတှငျး ဖွဈပှားနသေညျ့ အကွမျးဖကျမှုမြား၊ အပွဈမဲ့ အရပျသားမြားအပျေါ သကျရောကျမှုမြားကို ထောကျပံ့ပေးသလို ဖွဈသှားမညျ ဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ဒီမိုကရစေီကငျြ့သုံးမှု ပကျြစီးရာ ပကျြစီးကွောငျးတှငျလညျး ကူညီပေးသလို ဖွဈသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။ ထို့အပွငျ ၄ငျးဝယျယူလိုသူတို့သညျ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး စဈတပျအုပျခြုပျမှုကို ထောကျပံ့သလိုလညျး ဖွဈသှားပမေညျ။
အီးအိုငျအကေ တိုကျတှနျးလိုသညျမှာ။ ။
အရပျသားအစိုးရအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ လူမှုအခွပွေု အဖှဲ့အစညျးဝငျမြားကို ခကျြခငျြးလှတျပေးဖို့နှငျ့ ဒီမိုကရစေီ ကငျြ့ထုံးနဲ့အညီ ရှေးကောကျတငျမွှောကျထားသော အစိုးရလကျထကျသို့ အခြုပျအခြာအာဏာ ပွနျအပျစလေိုပါသညျ။
နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးကလညျး။ ။
မွနျမာနိုငျငံကို လုပျဆောငျမညျ့ စီးပှားရေး ဒဏျခတျ ပိတျဆို့မှုမြားကို စဈအစိုးရနှငျ့တကှ ၄ငျးနှငျ့ ဆကျစပျနသေော လူပုဂ်ဂိုလျမြားနှငျ့ အစိုးရပိုငျ လုပျငနျးမြားကို တိုကျရိုကျ ပဈမှတျထား လုပျဆောငျရပါမညျ။ ထိုကဲ့သို့ လုပျဆောငျရာတှငျလညျး သဈတောကဏ်ဍ (မွနျမာ့သဈလုပျငနျး) အပါအဝငျ သဘာဝအရငျးအမွဈဆိုငျရာ ကဏ်ဍလညျး ပါဝငျရပါမညျ။
အဆိုပါ စီးပှားရေး ဒဏျခတျ ပိတျဆို့မှုမြားသညျ တနိုငျငံနှငျ့ တိုကျရိုကျကုနျသှယျမှုကို ပဈမှတျထားရုံသာမကပဲ နိုငျငံတကာ ဈေးကှကျအတှငျး ကုနျကွမျးနှငျ့ ကုနျခြောမြားကို လှညျ့ပတျရှောငျးကှငျးကာ တငျပို့ခွငျးကိုလညျး တားဆီးနိုငျရပါမညျ။ သဈကုနျသှယျမှုတှငျဆိုလြှငျ အီးယူသညျ ၄ငျး၏ အီးယူတီအာ စညျးကမျးမြားကို မလိုကျနာသော မွနျမာနိုငျငံထံမှ သဈတငျသှငျးနမှေုကို ခကျြခငျြး တားမွဈသညျ့ ဘုံရပျတညျခကျြတခုကို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရပါမညျ။ အခွား တရားမဝငျသဈကို တားမွဈသော နိုငျငံမြားဖွဈသညျ့ အမရေိကနျ၊ သွစတွေးလနြှငျ့ ဂပြနျတို့ကလညျး ဈေးကှကျအတှငျး မွနျမာ့သဈမြား ရောကျရှိလာနိုငျခွကေို စုံစမျးစဈဆေးနိုငျပွီး တရားမဝငျ အရငျးအမွဈမှ လာသော သဈမြားကို သိရှိ ကိုငျတှယျ ဆောငျရှကျရပါမညျ။
မွနျမာ့တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျဦးဆောငျသော စဈခေါငျးဆောငျမြား၏ ကုမ်ပဏီမြား၊ မွနျမာ့စီးပှားရေး ကျောပိုရေးရှငျး (အမျအီးစီ) နှငျ့ မွနျမာ့စီးပှားရေး ဦးပိုငျလီမိတကျ (အမျအီးအိတျချြအယျလျ) တို့၏ ဝငျငှထှေကျငှမြေား အားလုံးနှငျ့တကှ ၄ငျးတို့၏ ဓနအငျအားကို စုံစမျးထောကျလှမျး စဈဆေးရပါမညျ။
ပုဂ်ဂလိက သဈကုနျသှယျရေး ကဏ်ဍ ကလညျး။ ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ အစပွု ခုတျထှငျ ထုတျလုပျထားသော သဈနှငျ့ သဈထှကျကုနျပစ်စညျးမြား ရောငျးဝယျမှုအား အားမပေးဖို့ လိုအပျပါသညျ။ ထိုသို့ အားမပေးရာတှငျ လကျရှိ ဥပဒမြေားကို လှညျ့ပတျရှောငျကှငျးကာ တတိယနိုငျငံမြားမှ တဆငျ့ခံ ရောငျးဝယျမှုမြားကိုလညျး အားမပေးဖို့ လိုအပျပါသညျ။
ယူကအေစိုးရ အနဖွေငျ့လညျး။ ။
ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီ ဥက်ကဌ အနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှ သဈအပါအဝငျ သဘာဝ သယံဇာတမြား တငျပို့မှုအပျေါ စီးပှားရေး ဒဏျခတျ ပိတျဆို့ တားမွဈရေးအတှကျ ကွိုးပမျးရပါမညျ။
မွနျမာနိုငျငံအား ဘဏ်ဍာရေးထောကျပံ့မှု မှနျသမြှကိုလညျး မွနျမာစဈအစိုးရနှငျ့တကှ ၄ငျးတို့၏ မိသားစုဝငျမြားနှငျ့ ၄ငျးတို့ လုပျကိုငျနသေော မွနျမာအစိုးရစဈတပျဖှဲ့ပိုငျ ကုမ်ပဏီမြားဆီသို့ ရောကျရှိမသှားစပေဲ မွနျမာနိုငျငံသားမြားထံသို့ တိုကျရိုကျရောကျရှိ အကြိုးပွုမှု သခြောစရေေး လုပျဆောငျရပါမညျ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့်တကွ ဆက်စပ်သော သစ်ကုန်သွယ်မှု အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ (အီးအိုင်အေ) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့များသည် တနိုင်ငံလုံးကို ထိန်းချုပ် အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေကာလ တနှစ်သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင် နိုင်ငံတဝန်းရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ထိပ်တန်း ပါတီဝင်များ၊ အရပ်သားခေါင်းဆောင်များနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရေးရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အဖမ်းခံရသည့်အပြင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများလည်း ကနဦး လုံးဝ ဖြတ်တောက်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ပြန်ရသော်လည်း ပုံမှန်မဖြစ်သေးသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့်ရော အချင်းချင်းပါ သီးခြားခွဲထုတ်ခံရသလို ဖြစ်နေ၏။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် အီးအိုင်အေ က မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် သစ်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းမှ စာတစောင်နှင့် ကြေညာချက်တခုကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ရရှိခဲ့ရာတွင် “မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သူ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ (အီးယူ) နိုင်ငံများမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဌာနနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတို့၏ တင်းကျပ်သော ခန့်ခွဲမှုအရ ပြဌာန်းထားသော သစ်တောဆိုင်ရာ တည်ဆဲ ဥပဒေများ၊ စည်းကမ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ တရားဝင် ကုန်သွယ်မှု ပြုနေကြပါသည်။” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းသည် ၄င်းတို့၏ ကြေညာချက်တွင် ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေကြောင်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့်တကွ ၄င်းတို့ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည် ဆိုသည့် အချက်အလက်များကို ပြည်ပမှ ဝယ်ယူနိုင်ခြေရှိသော လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (အန်ဂျီအို) များအား ဆက်လက် ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အီးအိုင်အေနှင့်တကွ အခြား အလားတူ အဖွဲ့အစည်းများကို တောင်းဆိုနေပါသည်။
အီးအိုင်အေရဲ့ ရပ်တည်ချက်အား ရပ်တည်ချက်အား ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောရလျှင် အီးအိုင်အေသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစပြု ခုတ်ထွင် ထုတ်လုပ်ထားသော မည်သည့် သစ်လုံးနှင့် သစ်သားဆက်စပ် ထွက်ကုန်မျိုး ကုန်သွယ်ခြင်းကိုမျှ ထောက်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
အီးအိုင်အေသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင် မြန်မာ့သစ်တောများဟာ ဗြောင်ကျကျ ခိုးယူ အသုံးချမှုများ၊ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့၏ ထိပ်ပိုင်း အရာရှိများထံတွင် အစပြုသော အဆင့်မြင့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူများက ၄င်းတို့၏ လုံခြုံရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးတို့အတွက် မှီခိုအားထားသော သစ်တောကြွယ်ဝသည့် နယ်မြေများအတွင်း ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများကို ဖော်ထုတ်နေခဲ့သော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အီးအိုင်အေသည် အဆိုပါ မြန်မာ့သစ်တောများအား ခိုးယူ အသုံးချမှုများကို ဆက်လက် ပံ့ပိုးနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၊ ဥရောပနှင့်တကွ အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ အတွင်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ရာတွင် ထိပ်တိုက် ထုတ်ဖော်ခံရသူများက အများအားဖြင့် နာကျည်းစိတ်ဆိုးကြသည်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သစ်တောဆိုင်ရာ ခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ထုံးနည်းလမ်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ဖို့အရေးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်က ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ့သစ်တောကဏ္ဍကလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်တကွ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ သစ်တောမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့်တကွ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းကပါ အားပေး ထောက်ခံမှုလည်း ရရှိနေခဲ့၏။
ယခုအခါတွင်မူ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့က ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အစိုးရအဖွဲ့က နိုင်ငံ၏ ကဏ္ဍအားလုံးကို အုပ်ချုပ်လုပ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ၄င်းအစိုးရအတွက်ကိုသာ အကျိုးရှိစေသည် ဖြစ်သောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ မြန်မာ့ သစ်တောဆိုင်ရာ ခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ထုံးနည်းလမ်း ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်ပကို သစ်တင်ပို့သူများနှင့်တကွ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝင်များက ၄င်းတို့သည် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းထွက် ကုန်ကြမ်းများကိုသာ အားထားမှီခိုရပြီး ၄င်းမြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကလည်း ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ရှိသည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ထောင်ချီသော အမြတ်အစွန်းများ ရရှိနေသော လုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း ၄င်းအမြတ်အစွန်းများ မည်သည့်နေရာကို ရောက်ရှိသွားပြီး မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုနေသည် ဆိုသည့် အခြေအနေများကို ကြပ်မတ်စောင့်ကြည့်ခံရခြင်း မရှိသကဲ့သို့ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံရခြင်းလည်း မရှိပေ။ ၄င်း၏ အမြတ်အစွန်း ခန့်ခွဲမှုမှာ လွန်စွာ မရှင်းမလင်းရှိလှပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောတင်ပို့မှု ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ လက်အောက်တွင် ရှိမနေသော လုပ်ငန်းတခုလည်း ဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းနှင့် သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက မြန်မာနိုင်ငံသည် အီးယူအဖွဲ့၏ သစ်တောဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (အီးယူတီအာ) နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုလည်း ပြောဆိုထား၏။ တကယ်တမ်း ထိုသို့မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်ဝယ်ယူလိုသူများ အားလုံးအား အီးအိုင်အေက သတိပေးလိုသည့် အချက်မှာ အီးယူအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စနစ်က အဆိုပါ အီးယူတီအာ စည်းကမ်းများကို ဘာ့ကြောင့် လိုက်နာမထားကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘုံရပ်တည်ချက်တခု ရှိသည် ဆိုသော အချက်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဖိုးတန်သစ်များသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတို့ နေထိုင်ရာ တောတောင်နယ်မြေများတွင် အဓိက တည်ရှိကြပြီး ၄င်းနယ်မြေများအတွင်း အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ခံနေရသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်ဖွဲ့သည် ၄င်းနယ်မြေများကို အင်အားသုံး ရယူခြင်းအားဖြင့် ပဋိပက္ခများ အရှိန်မြှင့် ဖြစ်ပွားလာစေကာ ထောင်နှင့်ချီသော အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများကိုလည်း ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးရစေခဲ့၏။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့၏ အာဏာသိမ်းမှုနှင့်အတူ အီးအိုင်အေက မြန်မာနိုင်ငံက သစ်နှင့် သစ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူလိုသူများအား သတိပေးလိုသည်မှာ ထိုသို့ ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် မြန်မာ့သစ်တောများအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသလို ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှု ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းတွင်လည်း ကူညီပေးသလို ဖြစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၄င်းဝယ်ယူလိုသူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို ထောက်ပံ့သလိုလည်း ဖြစ်သွားပေမည်။
အီးအိုင်အေက တိုက်တွန်းလိုသည်မှာ။ ။
အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းဝင်များကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နှင့် ဒီမိုကရေစီ ကျင့်ထုံးနဲ့အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရလက်ထက်သို့ အချုပ်အချာအာဏာ ပြန်အပ်စေလိုပါသည်။
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း။ ။
မြန်မာနိုင်ငံကို လုပ်ဆောင်မည့် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများကို စစ်အစိုးရနှင့်တကွ ၄င်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထား လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း သစ်တောကဏ္ဍ (မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း) အပါအဝင် သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍလည်း ပါဝင်ရပါမည်။
အဆိုပါ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုများသည် တနိုင်ငံနှင့် တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်မှုကို ပစ်မှတ်ထားရုံသာမကပဲ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်အတွင်း ကုန်ကြမ်းနှင့် ကုန်ချောများကို လှည့်ပတ်ရှောင်းကွင်းကာ တင်ပို့ခြင်းကိုလည်း တားဆီးနိုင်ရပါမည်။ သစ်ကုန်သွယ်မှုတွင်ဆိုလျှင် အီးယူသည် ၄င်း၏ အီးယူတီအာ စည်းကမ်းများကို မလိုက်နာသော မြန်မာနိုင်ငံထံမှ သစ်တင်သွင်းနေမှုကို ချက်ချင်း တားမြစ်သည့် ဘုံရပ်တည်ချက်တခုကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အခြား တရားမဝင်သစ်ကို တားမြစ်သော နိုင်ငံများဖြစ်သည့် အမေရိကန်၊ သြစတြေးလျနှင့် ဂျပန်တို့ကလည်း ဈေးကွက်အတွင်း မြန်မာ့သစ်များ ရောက်ရှိလာနိုင်ခြေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ပြီး တရားမဝင် အရင်းအမြစ်မှ လာသော သစ်များကို သိရှိ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သော စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ကုမ္ပဏီများ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (အမ်အီးစီ) နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက် (အမ်အီးအိတ်ခ်ျအယ်လ်) တို့၏ ဝင်ငွေထွက်ငွေများ အားလုံးနှင့်တကွ ၄င်းတို့၏ ဓနအင်အားကို စုံစမ်းထောက်လှမ်း စစ်ဆေးရပါမည်။
ပုဂ္ဂလိက သစ်ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ ကလည်း။ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစပြု ခုတ်ထွင် ထုတ်လုပ်ထားသော သစ်နှင့် သစ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်မှုအား အားမပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ အားမပေးရာတွင် လက်ရှိ ဥပဒေများကို လှည့်ပတ်ရှောင်ကွင်းကာ တတိယနိုင်ငံများမှ တဆင့်ခံ ရောင်းဝယ်မှုများကိုလည်း အားမပေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ယူကေအစိုးရ အနေဖြင့်လည်း။ ။
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်အပါအဝင် သဘာဝ သယံဇာတများ တင်ပို့မှုအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့ တားမြစ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရပါမည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှု မှန်သမျှကိုလည်း မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့်တကွ ၄င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ၄င်းတို့ လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့ပိုင် ကုမ္ပဏီများဆီသို့ ရောက်ရှိမသွားစေပဲ မြန်မာနိုင်ငံသားများထံသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိ အကျိုးပြုမှု သေချာစေရေး လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
EIA strongly condemns persecution of Karen environment activist in Myanmar